FURSAD KEDIS AH!!!!: Ka Jawaab 13-Kan Su’aalood Oo Hel Abaalmarin Dhan $100 Muddo 72 Saacadood Gudahood | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM FURSAD KEDIS AH!!!!: Ka Jawaab 13-Kan Su’aalood Oo Hel Abaalmarin Dhan $100 Muddo 72 Saacadood Gudahood
September 25, 2016 - Written by admin
Tolow Maxaan Soomaali Uga Waayay Qof Kaliya Oo Iiga Soo Jawaaba Siraha Uu Maqaalkani Xambaarsan Yahay Mudo 20 Bilood Ka Bacdi Markii Aan U Soo Bandhigay Bulshoweynta Ee Wali Sugayo,Mise Aniga Aya Gucdur Gudaaya! Ama Aniga Ayaa Waalan Oo Cadan Ba Laga Heesaya!
Soomaalidu Waxay Tidhaahdaa Colka Wadhaf Malagu Dayay! Yaa Imikaba La Kacaya Oo Kasoo Jawaabaya Oo Haf Ka Siinaya 100 $ Oo Muddo 72 Saacadood Gudo Hood Kaga Soo Jawaabaya?
Abwaanada suugaanta tiriya ee bulshada u gudbiya aragtidooda iyo dareenkoodu waxay suugaantoodu xambaarsan tahay cilmi iyo aragti fog, waxaanay sii saadaaliyaan waxyaalaha dhici doona iyagoo tilmaan ka qaadanaya waxa jooga. Haddaad dhinaca kale ka eegtana fariimaha ay dirayaan waxa ku duugan waxyaalo badan oo cajiib ah, iyagoo siyaabo kala duwan wax u soo gudbiya, islamarkana aad iyo aad ula la yaabayso miisaanka iyo macnaha ay xambaarsan yihiin qaarkood. Waxaana habboon bulshada wakhti walba joogta inay cabirto, oo ay kasoo saaraan suugaantaas cilmi iyo aqoon dhinacyo badan leh. Waxaana aynu la soconaa ummadaha aynu nidhaahno hore ayey u mareen, inay ka dhigaan jaaamacadahooda waxyaalihii iyo suugaantii soo jireenka ahaa iyagoo cilmi iyo aqoon durugsan ka raadiya ama ku dabaqaya, si loo toosiyo jiilka kolba jooga iyo in la tilmaamo lana tuso waxa loola jeedo. Sidaa daraadeed, waxaan u soo gudbinayaaa bulshada maanso uu tiriyey abwaan caan ahi, waxaana aan ka codsanya in loo baahan yahay in laga jawaabo su’aalahan:-
Sheeg abwaanka tiriyey maansadan laga soo qaatay baydadka hoos ku koran, adigoo sidoo kale lasoo baxaya baydadka maansada dhexdeeda oo laga helkaro ?
Kala soo bax maansada wakhtigii uu dhashay abwaankii tiriyey, adigoo ka dhex baadhaya maansada xisaab ahaan iyo sida aad ku heshay?
Waxaad sheegtaa magaca maansadan, adigoo kala soo baxaya baydadka maansada sheegna sidaad ku soo saartay?
Sidaasoo kale waxaad ka soo sarta 19 arrimood oo uu abwaanku sii saadaaliyey, wakhtigii lagu jiray halgankii dibu-xoraynta, oo la wada arkay, xaqiiqna noqdey?
Waxaad sheegtaa wakhtigii la tiriyey maansadan, adigoo adeegsanaya maansada, waxaanad sheegtaaa sidaad kusoo saartay?
Waxaad sheegtaa macnaha uu xambaarsan tahay maansadani iyo dareenka ay dadku ka qaateen wakhtigii ay soo baxdey iyo maanta micnaha laga dhuuxi karo?
Waxaad ka soo saarta inta qaafiyadood ee gobolkan maansada ee hoos ku qoran ee ku jira.Sidoo kale qaafiyadaha adag mid walba keen tu u dhiganta macnawiyan oo lagu badalan karo?
Waxa kale oo aad ka soo saarta inta shaqal dheer ku jirta maansadan iyo sababta uu u doortahay abwaanku kalmadahaasi?
Waxa kale oo aad sheegtaa 13 arrimood oo lagala soo baxayo qeybtan maansada hoos ku qoran oo iyaguna sheegaya xaalado kala duwan oo uu qariyey abwaanku?
Waxaad sheegtaa dareenka iyo maskaxda uu saacadda uu tirinayey abwaanku ku sugnaa, adigoo ka dhex dheeganaya qeybtan maansada?
Waxaad sheegtaa cidda ay maansadu ku socotay iyo siday u turjunteen iyo mahadhada ay ku reebtay wakhtigaasi la joogay?
Waxaad sheegtaa maansada guud ahaan inta bayd ee uu ka kooban yahay?
Waxaad sheegtaa abwaanka tiriyey iyo goobta uu joogay?
Dusduskay ku dheregtee
Dar Allay u kibirtee
Derimaha ka fara badan
Inta daran inta ka sii daran
Lagu guban dabka aan shido
Fiiro gaara: qofka 13-ka su’aalood dhamaystira jawaabahooda iyadoo xisaab iyo xikmad ku fadhida keena waxa la siin doonaa abaalmarin lacageed oo dhan $ 100 US Dollars muddo 72 saacadood gudahood ahlaga bilaabo maalinta isniinta ah ee barrito taariikhdu tahay 26/9/2016 saacada 8:00 subax nimo wuxuna wakhtihgaas ku eg yahay 28/9/2016 8:00 subaxnimo. 15 jir iyo ka sii sareeya ilaa 100 jir ayaa tartamaya. waxaanad ku soo dirtaa sulub2007@yahoo.com oo kaliya NO telephone. Waxana shardi ah in dhamaan suaalaha halkaa sareku xusan laga soo wada jawaabo. Waxana lagaga soo jawaabayaa shaksi shakhsi rag iyo dumar ba,loonanama bahna hadal badan iyo aar dheer ee jawaab kooban oo waafi ah.
Ujeedada aan ka leeyahay waxa weeyi u hiilinta suugaanteena iyo abwaanadeena aynu maaxinaynay qarniyo badan. Waxana ujeedada kareeban wax kasti oo kale oon ahay in laygaga daydo.isalamarkaasna da yarta la dhan
Dhansiiyo qiimaha,macaanka suugaanteenu Leedahay,iyo in Alleh naceb yahay Dulinka nooco doono ha noqdee ,kuwa dulmina uu sida uu doono u gargaaro.Waxaana Alleh ka baryaya abwaanka tiriyay gabaygan oo imika xanuunsanaya in Alleh shafiyo.
Rashiid Sulub Caalin